किन दिए विद्यासुन्दरले ९ करोड ?
काठमाडौंं, २५ माघ । काठमाडौं महानगरले छिमेकी नगरलाई समृद्ध बनाउने नीतिअनुरुप ९ वटा नगरलाई जनही एक/एक करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ ।
नगर—नगर साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत महानगरले काठमाडौं जिल्लाका नगरपालिकाहरुको हरियाली प्रवर्द्धन, पार्क निर्माण र सार्वजनिक जग्गा संरक्षण कार्यका लागि प्राप्त प्रस्तावका आधारमा उक्त रकम उपलब्ध गराउने भएको हो । शुक्रबार महानगरको सभा कक्षमा बसेको २९ औं बोर्ड बैठकले प्रस्तावक ९ वटा नगरलाई रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले जानकारी दिए । यसै कार्यक्रमअन्तर्गत गएको असार २० गते टोखा नगरलाई बौडेश्वर महादेव क्षेत्रमा बाल उद्यान निर्माणका लागि १ करोड रुपैयाँ प्रदान गरिसकेको छ । अब टोखाबाहेकका अन्य नगरलाई रकम दिइनेछ ।
बैठकले अन्तर सरकार साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ अनुमोदन गरेको छ । चमति जग्गा आयोजनाको काम समयमा सम्पन्न गर्न आयोजनालाई ७ करोड रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने गरेको बैठकले पर्यटन वर्ष २०२० लाई सफल बनाउन सम्पदा समितिका संयोजक एवं वडा १८ का अध्यक्ष न्हुच्छेकाजी महर्जनको संयोजकत्वमा १७ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिका सदस्यहरुमा वडाध्यक्षहरु शशिलाल श्रेष्ठ, राजेन्द्र मानन्धर, कुश ढकाल, बालकृष्ण श्रेष्ठ, दीपेन्द्र लामा, ईश्वरमान डंगोल, दिनेश डंगोल, रामकृष्ण श्रेष्ठ, चिनीकाजी महर्जन, ख्याम तिवारी, शोभा सापकोटा, शुद्धकुमार डंगोल र कार्यपालिका सदस्यहरु रमिताकमल स्थापित, लक्ष्मी श्रेष्ठ र हीरादेवी पोख्रेल हुनुहुन्छ । समितिको सदस्य सचिवमा सम्पदा तथा पर्यटन बिभागका बिभागीय प्रमुख रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै भवन निर्माण मापदण्ड पुनरावलोकन गर्न प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । समितिको सदस्यहरुमा वडाध्यक्षहरु मुकुन्द रिजाल, शशिलाल श्रेष्ठ, मोहन बिष्ट र चिनियाँमान बज्राचार्य हुनुहुन्छ । तीनकुने पार्क निर्माण निर्माण गर्न मुआब्जा उपलब्ध गराउन नेपाललाई आग्रह गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । बाँकीले मुआब्जा लिएपछि महानगरले पार्क निर्माण गर्ने योजना बनाएको प्रवक्ता डंगोलको भनाइ छ ।
सहरी सुरक्षाका लागि सिसि क्यामरा जडान गर्न नेपाल प्रहरीसँग सहकार्य गर्ने र यसका लागि प्रहरीलाई ३ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने बैठकले निर्णय गरेको छ । आउँदो फागुन १ गते काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको शुभारम्भ हुनेछ । यस कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र काठमाडौं महानगरपालिकाले संयुक्त रुपमा आयोजना गर्ने बैठकले गरेको अर्को निर्णय हो ।
Tagsकाठमाडौँ महानगरपालिका विद्यासुन्दर
बडादशैंको आज दोस्रो दिन, ब्रह्मचारिणीको विशेष पूजा गरिँदै
उदयपुरमा स्करपियो दुर्घटना : ५ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु
राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा आइसियूमा
नेपाल र चीनले एकैपटक सगरमाथाको उचाइ सार्वजनिक गर्ने तयारी
माओवादीहरु ओलीकाे चरणमा पर्नु हुँदैन : डा. बाबुराम भट्टराई
आजको मौसम कहाँ कस्तो रहला ?
खै १७ हजार १ सय ८५ को सम्पत्ति विवरण ?
ट्रेडमार्कको संख्या ५० हजार नाघ्यो